ပထမဆုံး Blockchain စမတ်ဖုန်း Exodus 1 ကို HTC မိတ်ဆက်လိုက်ပြီ
25 Oct 2018 . 12:11 PM
HTC ကတော့ လက်ရှိ Android ဖုန်းတွေထဲမှာ Security အကောင်းဆုံး၊ Crypto-cash တွေကို လွဲပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ Exodus 1 စမတ်ဖုန်းကို မိတ်ဆက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Digital Money ကို သမာရိုးကျ Transfer လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Blockchain နည်းပညာကို ထည့်သွင်းထားတာဆိုပေမယ့်လို့ ဒေတာသိမ်းဆည်းမှုမှတ်တမ်းတွေနဲ့ လုံခြုံရေးစနစ်အားလုံး Android OS နဲ့ မသက်ဆိုင် မချိတ်ဆက်ထားဘူးဆိုပါတယ်။
Blockchain Smartphone Exodus 1
ဒီလို သီးသန့်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Crytpokitties ခေါ် Application ကတဆင့် Crypto-cash တွေ သိမ်းဆည်းထားမယ်၊ လွဲပြောင်းနိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ နောက်ပြီး စမတ်ဖုန်းအခိုးခံရလို့ အချက်လက်ပါသွားမှာစိုးရိမ်နေရရင် Social Key Recovery Mechansim နဲ့ ဒေတာတွေပြန်ရယူနိုင်မယ် HTC ဆိုထားပါတယ်။
ဒီ Security Mechanism အလုပ်လုပ်ဖို့ ကိုယ်နဲ့အခင်မင်အရင်းနှီးဆုံး Friends တွေဆီ Recovery Information ပို့ထားရမှာပါ၊ ဒီအဆင့်ပြီးသွားရင် Key Manangement App ကို Install လုပ်ထားမှ နောက်ဆုံး Software လုပ်ထုံးအတိုင်း Key Data တွေကို သူငယ်ချင်းဖုန်းဆီ တိတ်တဆိတ်ပေးပို့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုသာဆိုရင် Exodus စမတ်ဖုန်းက Security ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာထက် ဖုန်းကကိုယ့်အသက်ထက်တန်ဖိုးကြီးနေသလိုပါပဲ၊ Bitcoin လို Digital Cash ဒေတာတွေဖုန်းထဲသိမ်း၊ လွဲပြောင်းတယ်ဆိုတာကလည်း Hacker တွေမျက်စိကြစရာ၊ တကယ်လို့ ဖုန်းခိုးခံရရင်လည်း ရင်လေးစရာ၊ နောက်ပြီး သူငယ်ချင်းစမတ်ဖုန်းထဲ Secret Information ပေးထားနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် နောက်ကျောဓားနဲ့ထိုးသွားရင် မလွယ်ပါဘူး။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Android ဖုန်းအားလုံးထဲမှာ တမူထူးခြားတဲ့ နည်းပညာဆန်းသစ်မှုနဲ့ ထွက်ရှိလာတဲ့ Exodus ဟာ Triple Camera ၊ A.I စနစ်ပလူပျံအောင်သုံးနေတဲ့ ဖုန်းတွေနဲ့ ဘာမှမသက်ဆိုင်သလိုပါပဲ။ 6” Display ကိုမှ HD+ Resolution သုံးထားတယ်၊ 16MP Dual Cameras နဲ့ 8MP Front Camera ၊ Snapdragon 845 SoC ၊ 6GB RAM နဲ့128GB Storage ပါရှိတာက Flagship ဖုန်းတလုံးအတွက် လုံလောက်တယ်ပြောရပေမယ့် ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Blockchain နည်းပညာနဲ့ HTC ပြန်ဖောက်ထွက်နိုင်ပါ့မလား?
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ $960 နဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၃၄ နိုင်ငံမှာ Pre-order လက်ခံနေပြီဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ မျက်စိကြနေတဲ့ Exodus စမတ်ဖုန်းလို့ ပြောရင်ပိုပြည့်စုံသွားမယ်ထင်ပါတယ်။
ပထမဆုံး Blockchain စမတျဖုနျး Exodus 1 ကို HTC မိတျဆကျလိုကျပွီ
HTC ကတော့ လကျရှိ Android ဖုနျးတှထေဲမှာ Security အကောငျးဆုံး၊ Crypto-cash တှကေို လှဲပွောငျးပေးနိုငျတဲ့ Exodus 1 စမတျဖုနျးကို မိတျဆကျသှားခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။ Digital Money ကို သမာရိုးကြ Transfer လုပျပေးနိုငျတဲ့ Blockchain နညျးပညာကို ထညျ့သှငျးထားတာဆိုပမေယျ့လို့ ဒတောသိမျးဆညျးမှုမှတျတမျးတှနေဲ့ လုံခွုံရေးစနဈအားလုံး Android OS နဲ့ မသကျဆိုငျ မခြိတျဆကျထားဘူးဆိုပါတယျ။
ဒီလို သီးသနျ့အသုံးပွုနိုငျဖို့အတှကျ Crytpokitties ချေါ Application ကတဆငျ့ Crypto-cash တှေ သိမျးဆညျးထားမယျ၊ လှဲပွောငျးနိုငျမယျလို့ သိရပါတယျ။ နောကျပွီး စမတျဖုနျးအခိုးခံရလို့ အခကျြလကျပါသှားမှာစိုးရိမျနရေရငျ Social Key Recovery Mechansim နဲ့ ဒတောတှပွေနျရယူနိုငျမယျ HTC ဆိုထားပါတယျ။
ဒီ Security Mechanism အလုပျလုပျဖို့ ကိုယျနဲ့အခငျမငျအရငျးနှီးဆုံး Friends တှဆေီ Recovery Information ပို့ထားရမှာပါ၊ ဒီအဆငျ့ပွီးသှားရငျ Key Manangement App ကို Install လုပျထားမှ နောကျဆုံး Software လုပျထုံးအတိုငျး Key Data တှကေို သူငယျခငျြးဖုနျးဆီ တိတျတဆိတျပေးပို့ထားမှာဖွဈပါတယျ။
အခုလိုသာဆိုရငျ Exodus စမတျဖုနျးက Security ပိုကောငျးတယျဆိုတာထကျ ဖုနျးကကိုယျ့အသကျထကျတနျဖိုးကွီးနသေလိုပါပဲ၊ Bitcoin လို Digital Cash ဒတောတှဖေုနျးထဲသိမျး၊ လှဲပွောငျးတယျဆိုတာကလညျး Hacker တှမေကျြစိကွစရာ၊ တကယျလို့ ဖုနျးခိုးခံရရငျလညျး ရငျလေးစရာ၊ နောကျပွီး သူငယျခငျြးစမတျဖုနျးထဲ Secret Information ပေးထားနိုငျတယျဆိုပမေယျ့ နောကျကြောဓားနဲ့ထိုးသှားရငျ မလှယျပါဘူး။
ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ Android ဖုနျးအားလုံးထဲမှာ တမူထူးခွားတဲ့ နညျးပညာဆနျးသဈမှုနဲ့ ထှကျရှိလာတဲ့ Exodus ဟာ Triple Camera ၊ A.I စနဈပလူပြံအောငျသုံးနတေဲ့ ဖုနျးတှနေဲ့ ဘာမှမသကျဆိုငျသလိုပါပဲ။ 6” Display ကိုမှ HD+ Resolution သုံးထားတယျ၊ 16MP Dual Cameras နဲ့ 8MP Front Camera ၊ Snapdragon 845 SoC ၊ 6GB RAM နဲ့128GB Storage ပါရှိတာက Flagship ဖုနျးတလုံးအတှကျ လုံလောကျတယျပွောရပမေယျ့ ပေါငျးစပျထားတဲ့ Blockchain နညျးပညာနဲ့ HTC ပွနျဖောကျထှကျနိုငျပါ့မလား?
လကျရှိအခြိနျမှာတော့ $960 နဲ့ နိုငျငံပေါငျး ၃၄ နိုငျငံမှာ Pre-order လကျခံနပွေီဖွဈပွီး စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတခြို့ မကျြစိကွနတေဲ့ Exodus စမတျဖုနျးလို့ ပွောရငျပိုပွညျ့စုံသှားမယျထငျပါတယျ။